Cortexolone 17a-propionate budada (19608-29-8) hplc = 98% | AASraw
/ Products / R & D Reagents / Kortexolone 17a-propionate budada
Rating: SKU: 19608-29-8. Category: R & D Reagents
AASraw waxaa la socda awoodda wax soo saarka iyo wax soo saarka laga bilaabo gram ilaa amar guud oo ah budada Cortexolone 17a-propionate (19608-29-8), iyada oo la raacayo Xeerarka CGMP iyo nidaamka xakamaynta tayada la socon karo.
Cortexolone 17a-propionate video budada ah
Kortexolone 17a-propionate budada Calaamadaha aasaasiga ah
Name: Kortexolone 17a-propionate budada
Formula kelli: C24H34O5
Miisaankani waa: 402.52
Color: Caddaan cad cad oo budada ah
Saamaynta Kortexolone 17a-propionate
Magacyada Kimikalka: Kortexolone-17a-propionate,
Magacyada kale: CB-03-01, Budada Winlevi, budada Breezula, 11-deoxycortisol 17a-propionate, Kortexolone 17a-propionate budada
Isticmaalka Cortexolone 17a-propionate
Cortexolone 17α-propionate waa antiandrogen a steroidal dardaro - gaar ahaan, an antagonist receptor antiandrogen - in uu yahay horumarinta ee Cassiopea iyo madxna Therapeutics loo isticmaalo sida dawada la mariyo ee daaweynta ee xaaladaha antiandrogen ku tiirsan oo ay ku jiraan akne vulgaris iyo alopecia androgenic (lab-hannaankii timo lumis).
Waa maxay qiyaasta Cortexolone 17a-propionate
Cortexolone 17a-propionate 1% kareemka, waa daaweyn cusub oo antiandrogen ah oo loogu talagalay daweynta jirka ee finanku. Daraasad tijaabo ah oo la kala soocay, labalaab dheelitir la'aanta ah ee la barbardhigo kiniinka iyo tretinoin 0 · 05% cream.
Acne vulgaris waa cilad ka mid ah unugta foosha ee ay weedhoodu ka qaybqaato bilawga iyo joogteynta. Isticmaalka antiandrogens ayaa sidaas awgeed awood u leh; Si kastaba ha noqotee, antiandrogenska loo isticmaalo maadada dharka lagama helo suuqa. Cortexolone 17a-propionate waa firfircooni cusub oo farsameysan oo suurtogal ah in laga faa'iidaysto finanku.
Si loo qiimeeyo nabdoonaanta iyo taabogalnimada Cortexolone 17a-propionate 1% kareemka finanka laf-dhabarka marka la barbardhigo cirbadda iyo tretinoin 0 · 05% cream.
Toddoba iyo toddobo nin oo qaba majaro waji ah ayaa 2-3 ku dhuftay 15-17 sida uu qabo baaritaanka caalamiga ah ee baaritaanka (IGA) ayaa loo kala saaray si loo helo kiriim cureemo ah (n = 1), ama Cortexolone 30a-propionate 0% Cream (n = 05), ama tretinoin 32 · 8 % Cream (n = 2) hal mar maalintii hurdada ee toddobaadka XNUMX. Waxqabadka qalliinka waxaa la qiimeeyay toddobaad kasta oo XNUMX oo ay ku jiraan tirada guud ee lesion-ka (TLC), tirada lafdhabarta (ILC), index of acne index (ASI) iyo IGA. Qiimaynta amniga waxaa ku jira dhibcaha cirridka ee maxalliga ah, imtixaanada shaybaarka, baaritaanka jireed, calaamadaha muhiimka ah iyo duubista dhacdooyinka qaska.
Cream-CNUMX-03 aad ayuu u fiicnaa, waxaana si weyn uga fiicnaa goobta placebo oo ku saabsan TLC (P = 01 · 0), ILC (P = 0017 · 0) iyo ASI (P = 0134 · 0) marka loo eego isbarbardhigga Waxsoosaarka ayaa sidoo kale ku soo bandhigay xawaare sare oo ah 0090% hagaajinta dhammaan xuduudaha kor ku xusan. CB-50-03
Daraasadan tijaabada ah waxay taageertaa fikradda ah isticmaalka daawooyinka antiandrogens ee daaweynta finanku. Cortexolone 17a-propionate 1% kareemku waxay u muuqataa in ay ku haboontahay dabeecada antiandrogen ee loogu talagalay isticmaalka maadada ah.
Sidee ayuu u shaqeeyaa Cortexolone 17a-propionate
Cortexolone 17α-propionate (CAS 19608-29-8), ama 11-deoxycortisol 17α-propionate, waa antiandrogen a steroidal dardaro - gaar ahaan, an antagonist receptor antiandrogen - in uu yahay horumarinta ee Cassiopea iyo madxna Therapeutics loo isticmaalo sida dawada la mariyo ee daaweynta xaaladaha xaddhaafka ku salaysan oo ay ku jiraan finanka laf-dhabarka iyo alopecia (iyo labka timo). Waa C17a propionate ester of 11-deoxycortisol (Cortexolone); C17a ester of 11-deoxycortisol ayaa la filayay in la helo dhaqdhaqaaqa antiandrogen, iyo kortexolone 17a-propionate ayaa loo xushay horumarinta iyadoo loo eegayo astaamaha daaweynta si fudud.
Mucaaradka, daroogada ayaa lagu ogaadey in ay leedahay firfircooni firfircoon ee maxaliga ah, laakiin waxqabadka nidaamka antiandrogen-ka ee aan fiicnayn marka la mariyo duritaanka subcutaneous. Intaa waxaa dheer, kortexolone 17a-propionate ma aha progonadotropic, oo soo jeedinaya in ay tahay peripherally selective. Bioassay, awoodda daroogada ee daroogada waxay ka weyntahay progesterone, flutamide, iyo finasteride waxayna u dhigantaa cyproterone acetate.
Maxkamad tijaabo oo tijaabo ah oo 2011 ah oo lagu daaweyn jiray kortexolone 17a-propionate 1% cream for finna wuxuu ogaaday in daawada ay si fiican u dulqaadan tahay oo ay aad u hoos u dhigtay calaamadaha finanku. Waxaa intaa dheer, waxtarkeeda wuxuu si weyn uga weyn yahay kan isbarbardhigga firfircoon, tretinoin 0.05% cream. Sida 2017, daroogadu waxay ku jirtaa tijaabooyinka wajiga III ee daaweynta acne vulgaris iyo wajiga labaad ee kiliiniga daaweynta alopecia.
Cortexolone 17a-proprionate, budada Breezula ee foomamka polymorphic: qoyskii ugu horreeyay ee patent, oo ku dhacaya Maraykanka 2022 / 23 iyo 2022 ee adduunka intiisa kale, wuxuu daboolayaa isticmaalka daawada ee rugta daaweynta finanka, alopecia iyo cudurrada kale; Patentka labaad ee qoyska ayaa daboolaya dhammaan foomamka loo yaqaan crystalline ee API, qaybaha ay ka kooban yihiin API iyo isticmaalka dawooyinka ee la xidhiidha daaweynta finanka, AGA iyo cudurrada kale: qoyskaan horay loo soo saaray oo ku yaal Maraykanka, Yurub, Canada, Japan iyo wadamada kale, waxay ku dhici doonaan 2030 ee Maraykanka iyo 2028 inta ka hartay adduunka.
Cortexolone 17a-propionate Pow Powder
Cortexolone 17α-propionate Cunto-shiidaal Khafiif ah
Si aad u weydiiso macaamilkayaga Macaamiisha (CSR) wixii faahfaahin ah, si aad u isticmaasho budada Winlevi
Cortexolone 17a-propionate Suuq-geynta
Cortexolone 17a-propionate Ma leedahay saameyn kasta
Cortexolone 17a-propionate waa farsamo cusub oo steroidal-ester ah, indho-indho iyo istrogen-antagonist, oo leh waxyaabo fudud oo antiinflammatory ah, taas oo u muuqata mid u habboon daaweynta finanka laf-dhabarka. CB-03-01 wuxuu ku dhaqmaa heerarka aadanaha iyo xajmiga jirka iyada oo aan la xakamaynin 5α-reductase ee maqaarka. Nooca steroid wuxuu si fudud u galaa maqaarka dadka wuxuuna si dhakhso ah u kicin karaa cortexolone waalid oo lacag la'aan ah kaas oo ka baxsan saamaynta nidaamka. Muhiimad ahaan, illaa taariikhda, ma muujin wax saameyn ah oo maxaliga ah ama nidaamka steroid ah.
Sida loo soo iibsado budada Cortexolone 17a-propionate laga bilaabo AASraw
Budada Arnica Montana